Shiinaha FOTON H7 warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Waad ku mahadsan tahay dabacsanaanta sare marka la eego qaabeynta iyo kala duwanaanshaha awooda, waxaa loo qaabeyn karaa safarka magaalooyinka iyo gaadiidka xamuulka. Qalabka, awoodda korontada, wax soo saar iyo wax soo saar ayaa si nidaamsan loogu qaabeeyey cimri dherer.
Guud ahaan Cabbirka 7300 * 2230 * 3030 (oo leh A / C)
Gawaarida Gawaarida 4000
Culayska Curb 6T
Awood Fadhi 21 + 1/23 + 1/25 + 1/28 + 1
Foton H7 cusub wuxuu isku daraa shaqeynta sare raaxada, iyo tayada codka oo leh amaan aad u wanaagsan. Culays badan ayaa la saaray kaliya maahan naqshadeeda aerodynamic iyo astaamaha darawalnimo ee wanaagsan, laakiin sidoo kale gaar ahaan gaar ahaan isticmaalka shidaalka ee hufan iyo kharashyada wareega nolosha ee hooseeya.
Nalka hore ee gaariga
Iyada oo la adeegsanayo farsamooyin awood leh oo isku dhafan iyo awood qaan-gaar ah oo R&D ah, baska taxanaha ah ee Foton 7M wuxuu leeyahay nidaam awood-kororsi oo heer sare ah, oo muujinaya waxqabadka kororka mootada iyo isticmaalka hooseeya.
Waxqabadka bilowga ah ee heer sare ah, gaar ahaan heerkulka hoose, -40ºC;
Gariirka ka hooseeya, buuqa hoose ee wadista raaxada leh, 7% ka hooseeya alaabada kale ee la tartameysa;
Miisaanku wuxuu gaaraa oo keliya 340kg, 15% -60% wuu ka fududyahay alaabooyinka kale ee la tartamaya;
Wax soosaarkii halkii liitar wuxuu ku dhowyahay 33.2kW / L, 10-35% ayaa ka sarreeya alaabada kale ee la tartameysa;
Xuddunta ugu badan waxay gaaraysaa 600NM, oo sifiican loogu qabtay fuulitaanka-foorarka.
Saliida nolosha oo dhan ayaa la heli karaa
Guryaha dariiq dhexaadka ah oo leh farsamayn gaar ah, adayg wanaagsan iyo xoog sare;
Wadista dhimista kama dambaysta ah oo leh qaab dhismeed isukeen ah, qalab xoog sare leh oo leh sifayn wanaagsan oo saliid ah;
Qaylada hoose iyo waxtarka gudbinta sare, hubinta raaxada gaariga iyo dhaqaalaha.
Iyada oo ku saleysan farsamooyinka qaan-gaadhka ah ee loo yaqaan 'Foton truck chassis', baska Foton wuxuu sameeyay dib-u-habeynta jasiiradda si uu si buuxda ugu ekaado qaab dhismeedka baska:
Isku halaynta ayaa ku kordhay 30% Jaangooyaha waasida, balaaran isuduwaha amaanka ayaa si weyn kor loogu qaaday Kasbashada balaaran ee suuqyada aduunka.
Jejebi disc hore & Fariin gadaal gadaal
Waxqabadka kala-baxa kuleylka wanaagsan, hagaajinta xasiloonida iyo waxtarka qaboojiyaha nidaamka bareega
Nidaamka digniinta bixitaanka haadka (LDWS) Nidaamka digniinta u siiya darawalka marka uu gaariga bilaabayo safka haadka oo aan ula kac ahayn
Foton waxaa lagu qalabeeyay keydka imtixaanka xirfadeed iyo raadadka tijaabooyinka kala duwan si loo damaanad qaado kalsoonida iyo hufnaanta qalabka iyo nidaamyada lagu rakibo baska Foton. Qaab dhismeed adag oo adag, baska Foton wuxuu iska caabbiyaa shilalka dhinac iyo madax-isku dhaca sidoo kale wuxuu ka hortagaa timaha dambe. Kahor intaysan bilaabin adeegga, waxay maraan tijaabooyin adag iyo xaqiijin.